काँग्रेस वडा अधिवेशनः जाजरकोटका सवै वडामा निर्विरोध ! •
काँग्रेस वडा अधिवेशनः जाजरकोटका सवै वडामा निर्विरोध !
पोस्ट गरिएको मिति : भाद्र २० - २०७८, आईतवार
आइरन गेटको रुपमा रहेको नेपाली काँगे्रसको वडा तहको अधिवेशनमा जाजरकोटमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भएको छ । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेसनको पहिलो चरणको रुपमा रहेको वडा अधिवेशनमा जाजरकोटका ७७ वटै वडामा सहमतिमा क्षेत्रिय प्रतिनिधी र वडा कार्यसमिति चयन भएको हो । शुक्रवार सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको वडा अधिवेशनले जाजरकोट काँग्रेसलाइ एकताको सन्देश प्रवाह गरेको नेताहरुको भनाइ छ ।